ချယ်လ်ဆီး မှာ ကျော်ဖြတ် ခဲ့ရတဲ့ ခက်ခဲတဲ့ အခိုက်အတန့် တချို့ အကြောင်း ပြောပြ ခဲ့တဲ့ #မိုရာတာ - SPORTS MYANMAR
ချယ်လ်ဆီး မှာ ကျော်ဖြတ် ခဲ့ရတဲ့ ခက်ခဲတဲ့ အခိုက်အတန့် တချို့ အကြောင်း ပြောပြ ခဲ့တဲ့ #မိုရာတာ
By Edi Tor September 25, 2019
စပိန် လက်ရွေးစင် တိုက်စစ်မှူး အယ်လ်ဗာရို မိုရာတာ ဟာ ယခုနှစ် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ မှာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ကနေ အက်သလက်တီကို အသင်း သို့ အငှား ဆက် ကစား နေပေမယ့် ရာသီကုန် မှာ အက်သလက်တီကို အသင်း ဟာ ၄င်းအတွက် ယူရို ၆၅ သန်း ပေးချေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မိုရာတာ ဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ကို ၂၀၁၇ – ၁၈ ဘောလုံး ရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ မှာ စပိန် ထိပ်သီး ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် အသင်း ကနေ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဆီသို့ ပေါင် ၅၂ သန်း နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ လာခဲ့ပေမယ့် မြင့်မားတဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး နဲ့ ထိုက်တန် တဲ့ ခြေစွမ်းမျိုး ပြသ နိုင်ဖို့ ရုန်းကန် ခဲ့ရပါတယ် ။
ထိုနှစ် ဘောလုံး ရာသီ ရဲ့ ဆောင်းရာသီ အပြောင်းအရွှေ့မှာ အာဆင်နယ် အသင်း မှ ဝါရင့် တိုက်စစ်မှူး အိုလီဗီယာ ဂျရူး ချယ်လ်ဆီး သို့ ပြောင်းရွှေ့ လာမှု နဲ့ အတူ မိုရာတာ တယောက် ပွဲထွက်ခွင့် နဲ့ ရုန်းကန် ခဲ့ရသလို ၊ နည်းပြဟောင်း ကွန်တီ ထွက်ခွာ သွားပြီးနောက် မော်ရစ်ဇီယို ဆာရီ လက်အောက် မှာလည်း အခွင့်အရေး တွေ ရခဲ့ပေမယ့် ခြေစွမ်း ပြနိုင်ဖို့ အတော်လေး ရုန်းကန် ခဲ့ရပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ရဲ့ ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့ မှာတော့ နောက်ထပ် နာမည်ကြီး တိုက်စစ်မှူး ဂွန်ဇာလို ဟီဂွာအင် ဟာ ချယ်လ်ဆီး သို့ အငှား ထပ်ရောက် လာခဲ့တော့ မိုရာတာ ရဲ့ ချယ်လ်ဆီး အသင်း က အနာဂတ် လည်း အဆုံးသတ် သွားခဲ့ရပါတယ် ။ ထို့နောက် အက်သလက်တီကို အသင်း သို့ အငှား ထွက်ခဲ့သလို ၊ အခု အခါမှာတော့ ထို ကလပ် နဲ့ပဲ မိုရာတာ ဟာ အငှား သက်တမ်းတိုးပြီး ဆက်ကစားလျက် ရှိနေပါတယ် ။
လက်ရှိ မှာ အက်သလက်တီကို အသင်း မှာ ကစား ရတာ ပျော်ရွှင် နေတဲ့ မိုရာတာ က မနေ့က စပိန် သတင်း ဌာန တခု ဖြစ်တဲ့ La Otra Cronica နဲ့ တွေ့ဆုံ ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူး မှာတော့ လန်ဒန် မှာ နေထိုင် ခဲ့ရတဲ့ ဘဝ အခြေအနေ နဲ့ ရုန်းကန်ခဲ့ရမှု အကြောင်း တွေကို ပြောပြ ခဲ့သလို ၊ သူ့ရဲ့ အမျိုးသမီး ဖြစ်သူ နေမကောင်း ဖြစ်ခဲ့စဉ် က ဘယ်လို အခြေအနေမျိုး ကြုံခဲ့ရတဲ့ အကြောင်း အခုလိုပဲ ပြောပြ ခဲ့ပါတယ် ။
မိုရာတာ က ” အခုဆို ကျွန်တော် ဟာ အက်သလက်တီကို အသင်း ကို အပြီးသတ် ပြောင်းရွှေ့ လာရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံ ရရင်တော့ ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ကစား ခဲ့ရတာက ကိုယ့်ရဲ့ ပရိသတ် အရေအတွက် များစေသလို ၊ နာမည် ပိုကြီး စေပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့ မိသားစု နဲ့ ကျွန်တော် ဟာ လန်ဒန် က ဆိုးရွားတဲ့ အခိုက်အတန့် တချို့ ကို ကျော်ဖြတ်ပြီးမှ ဒီကို ရောက်လာတာပါ ။ ”
” ဒီမှာတော့ ကျွန်တော် တို့ဟာ နေရထိုင်ရတာ အရမ်း ကို ပျော်ရွှင် ရပါတယ် ။ လူတွေ တော်တော်များများ ယုံချင်မှ ယုံကြမှာပါ ။ ကျွန်တော် တို့ဟာ ဒီမတိုင်ခင် ကတည်းက လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ ၊ ၅ နှစ် ကတည်းက အက်သလက်တီကို ကို ပြောင်းရွှေ့ လာဖို့ စီစဉ် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြဖူးပါတယ် ။ အခုတော့ ကျွန်တော် တကယ် ကို ပျော်ရွှင် နေရပါပြီ ။ လန်ဒန် မှာ နေတုန်း ကလား ? တကယ်ကို ဆိုးရွားတဲ့ အခိုက်အတန့် များစွာ ကျော်ဖြတ် ခဲ့ရတာပေါ့ဗျာ ။ ”
” ကျွန်တော် နောက်ကျော ဒဏ်ရာ ရခဲ့တဲ့ အချိန် က ဆေးထိုးအပ် နဲ့ အချက်များစွာ အထိုး ခံခဲ့ ရဖူးပါတယ် ။ ကျွန်တော် ဟာ အရင် ကတည်းက ဒီလို ဆေးထိုး ခံရတာမျိုး သဘောကျ နှစ်သက်တဲ့ သူတယောက် မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ။ အဲ့ဒီတော့ အိမ်မှာပဲ ဒီအတိုင်း စိတ်ပျက်ပျက် နဲ့ ကျော်ဖြတ် ခဲ့ရပါတယ် ။ ကျွန်တော့ ရဲ့ အမျိုးသမီး ဆိုရင်လည်း နေမကောင်း ခဏခဏ ဖြစ်တော့ ဘာမှ မစား နိုင်သလို ၊ တခါတလေ ကျရင် ပျို့အန်တာတွေပါ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ”
” အချိန် အတော်များများ မှာ ကျွန်တော် တို့ဟာ အိပ်ရာထဲမှာပဲ အချိန်ဖြုန်း ခဲ့ရပါတယ် ။ ခင်ဗျား ဟာ ကိုယ့်အနားမှာ ရှိနေတဲ့ သူတယောက် နေမကောင်း ဖြစ်နေတာ ကို နားလည် ပေးလို့ရပေမယ့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် က ပိုဆိုး နေတဲ့ အနေအထား မှာ ဘယ်လောက် အထိ ခံစားရခက်သလဲ ဆိုတာ အားလုံး သိကြမှာပါ ။ ” လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ် ။
ခယျြလျဆီး မှာ ကြျောဖွတျ ခဲ့ရတဲ့ ခကျခဲတဲ့ အခိုကျအတနျ့ တခြို့ အကွောငျး ပွောပွ ခဲ့တဲ့ #မိုရာတာ
စပိနျ လကျရှေးစငျ တိုကျစဈမှူး အယျလျဗာရို မိုရာတာ ဟာ ယခုနှဈ နှရောသီ အပွောငျးအရှေ့ မှာ ခယျြလျဆီး အသငျး ကနေ အကျသလကျတီကို အသငျး သို့ အငှား ဆကျ ကစား နပေမေယျ့ ရာသီကုနျ မှာ အကျသလကျတီကို အသငျး ဟာ ၄ငျးအတှကျ ယူရို ၆၅ သနျး ပေးခမြှော ဖွဈပါတယျ ။
မိုရာတာ ဟာ ခယျြလျဆီး အသငျး ကို ၂၀၁၇ – ၁၈ ဘောလုံး ရာသီ အပွောငျးအရှေ့ မှာ စပိနျ ထိပျသီး ရီးရဲလျ မကျဒရဈ အသငျး ကနေ ခယျြလျဆီး အသငျး ဆီသို့ ပေါငျ ၅၂ သနျး နဲ့ ပွောငျးရှေ့ လာခဲ့ပမေယျ့ မွငျ့မားတဲ့ ပွောငျးရှကွေ့ေး နဲ့ ထိုကျတနျ တဲ့ ခွစှေမျးမြိုး ပွသ နိုငျဖို့ ရုနျးကနျ ခဲ့ရပါတယျ ။
ထိုနှဈ ဘောလုံး ရာသီ ရဲ့ ဆောငျးရာသီ အပွောငျးအရှမှေ့ာ အာဆငျနယျ အသငျး မှ ဝါရငျ့ တိုကျစဈမှူး အိုလီဗီယာ ဂရြူး ခယျြလျဆီး သို့ ပွောငျးရှေ့ လာမှု နဲ့ အတူ မိုရာတာ တယောကျ ပှဲထှကျခှငျ့ နဲ့ ရုနျးကနျ ခဲ့ရသလို ၊ နညျးပွဟောငျး ကှနျတီ ထှကျခှာ သှားပွီးနောကျ မျောရဈဇီယို ဆာရီ လကျအောကျ မှာလညျး အခှငျ့အရေး တှေ ရခဲ့ပမေယျ့ ခွစှေမျး ပွနိုငျဖို့ အတျောလေး ရုနျးကနျ ခဲ့ရပါတယျ ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ရဲ့ ဇနျနဝါရီ အပွောငျးအရှေ့ မှာတော့ နောကျထပျ နာမညျကွီး တိုကျစဈမှူး ဂှနျဇာလို ဟီဂှာအငျ ဟာ ခယျြလျဆီး သို့ အငှား ထပျရောကျ လာခဲ့တော့ မိုရာတာ ရဲ့ ခယျြလျဆီး အသငျး က အနာဂတျ လညျး အဆုံးသတျ သှားခဲ့ရပါတယျ ။ ထို့နောကျ အကျသလကျတီကို အသငျး သို့ အငှား ထှကျခဲ့သလို ၊ အခု အခါမှာတော့ ထို ကလပျ နဲ့ပဲ မိုရာတာ ဟာ အငှား သကျတမျးတိုးပွီး ဆကျကစားလကျြ ရှိနပေါတယျ ။
လကျရှိ မှာ အကျသလကျတီကို အသငျး မှာ ကစား ရတာ ပြျောရှငျ နတေဲ့ မိုရာတာ က မနကေ့ စပိနျ သတငျး ဌာန တခု ဖွဈတဲ့ La Otra Cronica နဲ့ တှဆေုံ့ ခဲ့တဲ့ အငျတာဗြူး မှာတော့ လနျဒနျ မှာ နထေိုငျ ခဲ့ရတဲ့ ဘဝ အခွအေနေ နဲ့ ရုနျးကနျခဲ့ရမှု အကွောငျး တှကေို ပွောပွ ခဲ့သလို ၊ သူ့ရဲ့ အမြိုးသမီး ဖွဈသူ နမေကောငျး ဖွဈခဲ့စဉျ က ဘယျလို အခွအေနမြေိုး ကွုံခဲ့ရတဲ့ အကွောငျး အခုလိုပဲ ပွောပွ ခဲ့ပါတယျ ။
မိုရာတာ က ” အခုဆို ကြှနျတျော ဟာ အကျသလကျတီကို အသငျး ကို အပွီးသတျ ပွောငျးရှေ့ လာရတော့မှာ ဖွဈပါတယျ ။ အမှနျအတိုငျး ဝနျခံ ရရငျတော့ ပရီးမီးယားလိဂျ မှာ ကစား ခဲ့ရတာက ကိုယျ့ရဲ့ ပရိသတျ အရအေတှကျ မြားစသေလို ၊ နာမညျ ပိုကွီး စပေါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတော့ မိသားစု နဲ့ ကြှနျတျော ဟာ လနျဒနျ က ဆိုးရှားတဲ့ အခိုကျအတနျ့ တခြို့ ကို ကြျောဖွတျပွီးမှ ဒီကို ရောကျလာတာပါ ။ ”
” ဒီမှာတော့ ကြှနျတျော တို့ဟာ နရေထိုငျရတာ အရမျး ကို ပြျောရှငျ ရပါတယျ ။ လူတှေ တျောတျောမြားမြား ယုံခငျြမှ ယုံကွမှာပါ ။ ကြှနျတျော တို့ဟာ ဒီမတိုငျခငျ ကတညျးက လှနျခဲ့တဲ့ ၄ ၊ ၅ နှဈ ကတညျးက အကျသလကျတီကို ကို ပွောငျးရှေ့ လာဖို့ စီစဉျ ဆှေးနှေး ခဲ့ကွဖူးပါတယျ ။ အခုတော့ ကြှနျတျော တကယျ ကို ပြျောရှငျ နရေပါပွီ ။ လနျဒနျ မှာ နတေုနျး ကလား ? တကယျကို ဆိုးရှားတဲ့ အခိုကျအတနျ့ မြားစှာ ကြျောဖွတျ ခဲ့ရတာပေါ့ဗြာ ။ ”
” ကြှနျတျော နောကျကြော ဒဏျရာ ရခဲ့တဲ့ အခြိနျ က ဆေးထိုးအပျ နဲ့ အခကျြမြားစှာ အထိုး ခံခဲ့ ရဖူးပါတယျ ။ ကြှနျတျော ဟာ အရငျ ကတညျးက ဒီလို ဆေးထိုး ခံရတာမြိုး သဘောကြ နှဈသကျတဲ့ သူတယောကျ မဟုတျခဲ့ပါဘူး ။ အဲ့ဒီတော့ အိမျမှာပဲ ဒီအတိုငျး စိတျပကျြပကျြ နဲ့ ကြျောဖွတျ ခဲ့ရပါတယျ ။ ကြှနျတော့ ရဲ့ အမြိုးသမီး ဆိုရငျလညျး နမေကောငျး ခဏခဏ ဖွဈတော့ ဘာမှ မစား နိုငျသလို ၊ တခါတလေ ကရြငျ ပြို့အနျတာတှပေါ ဖွဈခဲ့ပါတယျ ။ ”
” အခြိနျ အတျောမြားမြား မှာ ကြှနျတျော တို့ဟာ အိပျရာထဲမှာပဲ အခြိနျဖွုနျး ခဲ့ရပါတယျ ။ ခငျဗြား ဟာ ကိုယျ့အနားမှာ ရှိနတေဲ့ သူတယောကျ နမေကောငျး ဖွဈနတော ကို နားလညျ ပေးလို့ရပမေယျ့ ကိုယျကိုယျတိုငျ က ပိုဆိုး နတေဲ့ အနအေထား မှာ ဘယျလောကျ အထိ ခံစားရခကျသလဲ ဆိုတာ အားလုံး သိကွမှာပါ ။ ” လို့ ပွောကွား ခဲ့ပါတယျ ။